मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम छ कि छैन यसरी हेर्नुहोस् ! - सर्लाही टुडे
मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम छ कि छैन यसरी हेर्नुहोस् !
May 5, 2022 Karan SahLeaveaComment on मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम छ कि छैन यसरी हेर्नुहोस् !
बैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनावमा एक करोड ७७ लाखा ३३ हजार ७२३ मतदाता छन् । आउँदो वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका मतदाताले स्थानीय तह चुनावमा मत दिन पाउनेछन् । आयोगले मतदाताको नामावली प्रकाशित गरिसकेको छ ।
फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरेका र वैशाख २९ गतेसम्म १८ वर्ष पूरा भएकाले आफ्नो नाम यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ ।
यो लिंकमा गएर आफ्नो प्रदेश, जिल्ला, वडा नम्बर र मतदान स्थलको विवरण छानेपछि त्यस क्षेत्रमा भएका सबै मतदाताहरुको विवरण देखिन्छ । त्यहाँ आफ्नो नाम छानेपछि विवरणमा जन्ममिति र नागरिकता नम्बर राखेपछि मतदाता नामावलीमा भएको सबै विवरण हेर्न सकिन्छ ।
वैशाख २७ देखि नाका बन्द गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन , ३० गते सवारी साधन न चल्ने
जसपाले बुधबार देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने
December 21, 2020 SarlahiToday
स्मार्ट सिटी बन्दै गरेको मलंगवा नगरभित्रकै सडक हिलाम्मे